Nandevozin’ny Zava-mahadomelina Taloha: Tena Nivarilavo Aho
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Basque Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Niue Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tongan Tseky Twi Tzotzil Télougou Urhobo Valencienne Vietnamianina Waray-Waray Yorobà Éwé
Notantarain’i SOLOMONE TONGA
Fiainany Taloha: Mpidoroka zava-mahadomelina ary efa nigadra
Avy eto Tonga izahay mianakavy. Fitambarana nosy 170 eo ho eo izy io, ary any amin’ny faritra atsimoandrefan’i Pasifika no misy azy. Tsotra be ny fiainanay taloha satria tsy nisy jiro ny tranonay, sady tsy nanana fiara izahay. Nisy rano tamin’ny paompy ihany anefa ny tranonay ary nanana akoho vitsivitsy izahay. Rehefa vakansy izaho sy ny rahalahiko roa, dia nanampy ny dadanay tamin’ny fambolena. Nanana tany mantsy izahay dia namboly akondro, oviala, saonjo, ary mangahazo. Ireny no namidin’ny dadanay mba hanampiana an’izay vola kely azony avy amin’ny asa an-tselika madinidinika. Tena nanaja ny Baiboly sy nandeha niangona foana izahay mianakavy, hoatran’ny ankamaroan’ny mponina eto. Nieritreritra anefa izahay hoe tsy ho sambatra mihitsy raha tsy mifindra any amin’ny tany manankarena.
Nisy dadatoanay nanampy anay hifindra tany Kalifornia, any Etazonia, tamin’izaho 16 taona. Hafa mihitsy ny kolontsaina tany, dia tsy mora taminay ny nizatra an’ilay izy. Mba lasa nanam-bola kokoa aloha izahay e! Tany amin’ny faritra mahantra anefa izahay no nipetraka, dia ny heloka bevava sy ny rongony no tena nanjaka. Matetika izahay no naheno feom-basy tamin’ny alina. Natahotra andian-jiolahy koa ny ankamaroan’ny mpiray tanàna taminay. Betsaka no nitondra basy mba hiarovan-tena na handaminana tsy fifanarahana. Efa voatifitra tamin’izany aho, indray mandeha, dia mbola ato amin’ny tratrako ilay bala hatramin’izao.
Mba te hanao ny fanaon’ny ankizy aho, tamin’izaho tany amin’ny lise. Niova tsikelikely aho dia lasa tia namonjy fety feno filibana, niboboka toaka, nahery setra, ary nampiasa zava-mahadomelina. Lasa nandevozin’ilay zava-mahadomelina atao hoe kôkainina aho, tatỳ aoriana, ary nanomboka nangalatra mba hahafahako mividy an’ilay izy. Marina fa mpiangona nafana fo ny fianakaviako. Tsy mba nisy nanoro mihitsy anefa aho hoe ahoana no atao raha tsy te ho voatarika haditra. Efa imbetsaka aho no voasambotra satria nahery setra. Tena nivarilavo aho, ary nigadra tamin’ny farany.
Tsikaritry ny voafonja iray hoe nitazona Baiboly aho, indray andro, tamin’ny 1997. Krismasy tamin’izay, ary andro tena masina izy io amin’ny ankamaroan’ny mponin’i Tonga. Nanontany ahy ilay voafonja raha fantatro izay lazain’ny Baiboly momba ny nahateran’i Kristy, fa tsy nanan-kavaly mihitsy aho. Nasehony ahy avy eo fa tena tsotra ny zavatra tantarain’ny Baiboly momba ny nahaterahan’i Jesosy. (Matio 2:1-12; Lioka 2:5-14) Hitako hoe tsy voalaza ao akory ny ankamaroan’ny zavatra fanao rehefa Krismasy. Gaga be aho, dia lasa saina hoe inona koa no lazain’ny Baiboly. Nisy fivoriana nalamin’ny Vavolombelon’i Jehovah tao am-ponja, isan-kerinandro. Nanatrika an’izany foana io lehilahy io, ka tapa-kevitra ny hiaraka aminy koa aho. Ny bokin’ny Apokalypsy no nodinihin’izy ireo. Zara raha nisy azoko ny zavatra noresahin-dry zareo, nefa hitako hoe avy ao amin’ny Baiboly daholo.
Nanaiky aho rehefa nanasa ahy hianatra Baiboly ry zareo. Sambany aho vao nahalala hoe mampanantena ny Baiboly fa hisy paradisa eto an-tany. (Isaia 35:5-8) Lasa azoko tsara hoe nila nanova be ny fiainako aho raha te hampifaly an’Andriamanitra. Fantatro fa tsy havelan’i Jehovah Andriamanitra hiaina ao amin’ilay Paradisa nampanantenainy aho raha mbola manohy ny fahazaran-dratsiko. (1 Korintianina 6:9, 10) Tapa-kevitra àry aho hoe hifehy ny fahatezerako, hiala amin’ny sigara, ary tsy hiboboka toaka na hidoroka zava-mahadomelina intsony.
Nafindra tany amin’ny fonja hafa aho, tamin’ny 1999. Efa ho tapitra ny saziko tamin’izay. Tsy nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy aho nandritra ny herintaona mahery. Tapa-kevitra anefa aho hoe hanao fiovana foana. Tsy navelan’ny fanjakana nijanona tany Etazonia intsony aho, tamin’ny 2000, ary nalefa nody teto Tonga.
Nitady Vavolombelon’i Jehovah aho raha vao tafaverina teto, ary nianatra Baiboly indray. Tiako ny zavatra nianarako. Variana koa aho nahita hoe avy ao amin’ny Soratra Masina daholo ny zavatra nampianarin’ny Vavolombelona tatỳ, hoatran’ny tany Etazonia ihany.
Fantatr’olona teo an-tanàna i Dada satria lohandohany tao amin’ny fiangonana nisy azy. Tezitra sy sahiran-tsaina àry ny fianakaviako tamin’izaho vao nanomboka nifanerasera tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Faly anefa i Dada sy Neny, tatỳ aoriana, satria nanampy ahy hiala tamin’ny fahazaran-dratsiko ny toro lalan’ny Baiboly sady nanatsara ny fiainako.
Ora maromaro no laniko isan-kerinandro mba hisotroana kava, hoatran’ny ataon’ny lehilahy maro atỳ Tonga
Ny niala tamin’ny fisotroana tafahoatra no sarotra indrindra tamiko. Efa fanaon’ny lehilahy atỳ Tonga mihitsy ny hoe mandany ora maromaro isan-kerinandro hisotroana kava. Karazana toaka vita avy amin’ny fakan’ny hazo poavra izy io ary mampatory. Rehefa tafaverina tatỳ aho dia lasa fahazarako ny hoe nankany amin’ny toerana fisotroana kava, efa ho isan’alina, ary tsy niala tao raha tsy efa mamo tampona. Ny namako rahateo koa tsy nisy niraharaha ny fitsipiky ny Baiboly. Rehefa nandeha ny fotoana, dia takatro hoe nampahatezitra an’Andriamanitra ny fahazaran-dratsiko. Nanao fiovana àry aho satria te hotahin’Andriamanitra sy hankasitrahany.
Nanomboka nanatrika ny fivoriana rehetra nalamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho. Niaraka tamin’ny olona niezaka nampifaly an’Andriamanitra aho tany, dia izany no nanampy ahy tsy ho resin’ny fakam-panahy. Natao batisa aho tamin’ny 2002, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Nandray soa aho satria nanam-paharetana tamiko Andriamanitra. Milaza mantsy ny Baiboly hoe: “Manam-paharetana aminareo [i Jehovah], satria tsy tiany hisy ho ringana fa mba ho tonga amin’ny fibebahana kosa ny rehetra.” (2 Petera 3:9) Efa ela izy no afaka nandringana an’ity tontolo ratsy ity nefa tsy nataony izany, amin’izay mba afaka minamana aminy ny olona hoatr’ahy. Faly aho rehefa mieritreritra hoe azony ampiasaina koa aho mba hanampy ny hafa hifandray aminy.
Nampian’i Jehovah aho dia tsy nivarilavo intsony. Tsy nangalatra intsony aho mba hividianana an’ireo zavatra nanandevo ahy taloha. Miezaka kosa aho izao manampy ny mpiray tanàna amiko mba ho lasa naman’i Jehovah. Nahazo vady mahafinaritra aho rehefa nifanerasera tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tea no anarany. Manan-janaka lahy kely izahay, ary tena sambatra ny tokantranonay. Ampianarinay ny olona hoe inona no lazain’ny Baiboly momba ny fiainana mandrakizay ao amin’ny paradisa amin’ny hoavy.
Hizara Hizara Tena Nivarilavo Aho
ijwcl no. 8